Yese Hofisi Yekumba Inoda Imwe! | Martech Zone
Rinopfuura rinopfuura gore rapfuura (2005) Ini ndanga ndichiita zvakati wandei zvekubvunza padivi uye ndaida kuwana imwe nyowani yemahara yakatenderedza imba kuti ibate. Ini ndakatenga komputa nyowani, nyowani yegegear isina waya uye makadhi asina waya… uye yakanakisa kudyara yaive yangu LinkStation.
Iyo LinkStation inosangana yakananga kune yangu isina waya router uye ine 250Gb yenzvimbo. Iyo yekushandisa interface yeiyo LinkStation iri nyore chaizvo ... ini ndakakwanisa kumisikidza mota yeumwe neumwe wevana vangu, komputa yangu, yepakati mimhanzi dhairekitori, uye mutengi backup. Iyo LinkStation yakauyawo ne USB nzira yekugovana purinda, FTP software, uye kunyangwe midhiya inoshambadzira software. Izvo zvinonditendera kuti ndiise purindai yangu kure kure nemakomputa uye kumwe kunyore.
Chinhu changu chandinoda, zvakadaro, kuva nenzvimbo yakawanda kure nePC yangu uye pane sosi yeneti. Pese pandaipedza chirongwa, ndaikopa uko. Pese pandaikopa pasi uye nekuisa software, ini ndaiteedzera uko, uye pese pandaida kugovana zvinhu pakati pemacomputer - isu taingopfuudza mafaera tichigovana pakati pawo ese. Kwete 'folda inogoverana', hapana ekuisa disks, hapana matambudziko zvachose.
Inenge mwedzi minomwe yapfuura, PC yangu yakavharirwa zvachose neNorton Antivirus inogadziridza iyo yakabvarura chikamu chebhutsu. Ini ndaifanira kugadzirisa dhiraivha uye kurodha pasi zvese kubva pakutanga. Zvinogona kunge zvakanyanyisa kurira kunze kwekunge ndine chinhu chose yakatakurwa pamambure anotyaira. Ndakanga ndadzokera muzuva kana zvakadaro uye handina kupotsa kurohwa.
Gore nehafu gare gare uye zvino mumwe wevatengi vangu akandikumbira kuti ndimboita ongororo yekudzokorora kwaari. Yakanga yareba kwenguva yakareba zvekuti ndakanga ndisina kana maapplication akatakurwa zvekare. Vhiki rapera, ini ndakasvetukira pane mugove uye kudzoreredza maapplication. Vhiki rino, ini ndakaburitsa kuongorora kwekare uye ndakakwanisa kuburitsa ongororo iyi masikati. Kuzvidzidzisazve pachikumbiro ndicho chikamu chakaomesesa!
Saka - heano mamwe matipi evanyanzvi uye amateurs zvakafanana vanoita basa rakawanda pamakomputa avo:
Chengetedza mari mumutambo wekuchengetedza.
Shandisa network yekuchengetedza mudziyo. Wese mukana waunowana, teedzera pamusoro pebasa rauri kuzviitira.
Kopa software yekumisikidza, inogadziridza, mutyairi kugadzirisa, uye kunyangwe serial manhamba pane iwo mugove. Izvi zvinoisa zvese zvakachengeteka munzvimbo mbiri.
Chinhu chakanaka pamusoro pekuchengetedzwa kwenetiweki ndechekuti hapana backup uye yekudzosa nguva inodiwa… ingo teedzera mafaera pamusoro kudhiraivho, nekukurumidza nenzira iyi. (Ndine backups yeimwe yePC dzangu pamusoro payo).
Uye kana iwe uchinge uchishamisika, iyo Mac inozviona zvese zvakanaka futi! Kunyangwe iyo yakagovaniswa purinda!
Tags: negadziriro yeparutivilinkstationchengetedzo mudziyo
Iyo Peji Yekutarisa haife
Zvita 4, 2006 na9: 32 PM
Neniwo ndiri fan mukuru weiyo LinkStation chishandiso. Ndine iyo 160GB vhezheni pachangu uye yanga ichimhanya yakasimba kweanenge makore maviri ikozvino. Chinhu chakanakisa ndechekuti nekuda kwehunhu hwayo hwekushandisa, hapana kana kuchengetedzwa kana kuchengetedzwa uye kudyisa kunodiwa.
Zvita 4, 2006 na10: 49 PM
Mushure mekunge ndatenga yangu, shamwari yangu yakatenga iyo 1Tb vhezheni. Ndakaita godo! Iye anoda wake, futi. Ndiri kuda kuziva kuti nei mumwe munhu asati avaka iyo printa / harddrive / wireless router parizvino.